अमेजन मार्केटिंग सेवा कसरी प्रयोग गर्न को लागी आफ्नो लाभ दोहोर्याउने?
यदि तपाईं अमेजनमा आफ्नो उत्पादन बेच्नु हुन्छ भने, तपाइँको मुख्य लक्ष्य शायद तपाईंको सामान को सबै भन्दा अधिक संभावित ग्राहकहरु को सामने प्रस्तुत गर्न को लागी छ, र अंततः अधिक आय उत्पन्न. सम्पूर्ण अमेजन को रैंकिंग एल्गोरिदम को विक्रेताहरु लाई उनको प्राथमिकताहरु र खोज इतिहास को आधार मा सबै सटीक खोज परिणामों संग प्रदान गर्न को लागी डिजाइन गरिएको छ. त्यसो भए, तपाईलाई आवश्यक पर्दछ तपाईले लक्षित दर्शकहरूको अगाडि आफ्नो उत्पादन देखाउन अमेजन दिशानिर्देशहरू पछ्याउनु हो.
तपाईंको हालको रणनीतिको बावजुद, यो तपाईंको विकल्पहरू विचार गर्न कहिल्यै गाह्रो छैन. सौभाग्य देखि, अमेजनले विभिन्न सेवाहरूसँग व्यापारीहरूलाई प्रदान गर्दछ जुन तिनीहरूको बिक्री प्रक्रियालाई सुदृढ पार्न सक्छ र त्यसपछि अमेजनमा बढी राजस्व ल्याउन सक्छ. अमेजन मार्केटिङ सेवा कार्यक्रम अमेजन विक्रेन्डहरूका लागि उत्तम छनौट हो जसले अवसरहरू खोज्नका लागि आफ्नो बिक्री बढाउन र समग्र व्यापार राजस्व बढाउनको लागि खोजी गर्दैछ.
तथापि, यो नयाँ म्याग्दी सेवाहरू कोसिस गर्न वा तपाईंको सिद्ध तरिकाहरू प्रयोग गर्न कोसिस गर्नु आवश्यक छ कि यो प्रश्न बढ्दैछ. तर यदि नयाँ मार्केटिंग रणनीतिहरू अझ राम्रो देखा पर्नेछ? त्यसैले, म अमेजन ई-कमर्स गेमको शीर्षमा रहन अमेजन मार्केटिङ सेवाहरू प्रयास गर्न लायक छ. त्यसोभए, हामी AMS को प्रविधि र सहमतिलाई छलफल गर्नको लागि बुझ्नको लागि कि यो लगानीको लायक छ वा होइन.
अमेजन मार्केटिङ सर्भर: काम गर्ने सिद्धान्त
अमेजन मार्केटिङ सर्भर (एएमएस) एक प्रति-वेतन क्लिक विज्ञापन प्लेटफर्म हो जहाँ बिक्रेताहरूले आफ्नो उत्पादनहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। लक्षित खोजी सर्तहरू, उत्पादनहरू, प्राथमिकताहरू, र किनमेल इतिहासमा आधारित लक्षित दर्शकहरूको अगाडि.
अमेजन मार्केटिंग सेवा कार्यक्रम व्यवसाय को लागि निम्न अवसरों प्रदान गर्दछ:
उत्पादन प्रदर्शन विज्ञापन;
हेडलाइन खोज विज्ञापन;
प्रायोजित उत्पादनहरु विज्ञापन.
पहिलो AMS कार्यक्रममा केवल अमेजन विक्रेताओंका लागि उपलब्ध थियो. यद्यपि, नियमहरू परिवर्तन गरिएका छन्, र आजकल यो प्रत्यक्ष रूपमा खाता धारकहरू र विक्रेता प्रतिनिधिहरू प्रकाशित गर्न पनि उपलब्ध छन्. तथापि, यो उल्लेख गर्नु पर्छ कि अमेजन मार्केट सेवाहरूमा रुचि राख्ने व्यापारी अमेजन विक्रेता केन्द्रीय प्लेटफर्मको सहभागी हुनुपर्दछ. यो विज्ञापन सेवाहरू Amazon विक्रेताओंका लागि लक्षित, र कीवर्ड-संचालित अभियानहरू प्रदान गर्न सिर्जना गरिएको थियो. अमेजनले स्टोर गर्ने म्याग्दीहरूसँग विज्ञापन गर्ने एक विशाल डाटाबेस प्रयोग गर्छन् जुन उनीहरूको ग्राहकसँग गुंजाइश हुने विश्वास गर्छन्. अमेजन अमेजनसँग अघिल्लो पसल अनुभवको डेटा एकत्रित गर्दछ र राति पसलहरूले प्लेटफर्ममा केहि चीज खोज्न खोज्छ. त्यसोभए, यी सबै पक्षहरू खातामा राख्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो विज्ञापनहरू तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरु को लागी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको जस्तै उत्पादनहरु मा रुचि राख्दछ.
तपाई अमेजन मार्केट सर्भर प्रयोगकर्ता इन्टरफेस मार्फत आफ्नो विज्ञापन अभियान व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ. यो इन्फेसमेन्टले तपाईंलाई आफ्नो राजस्व र प्रति क्लिक प्रति ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं सजिलै संग आफ्नो लगानीमा फर्किनुको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, तपाईं बिक्रीको विज्ञापन लागत ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ र जाँच गर्नुहोस् कि तपाईंको विज्ञापन अभियान लाभदायक छ वा होइन कि छैन.
तथापि, यो अमेजन कार्यक्रममा यसको कमी पनि छ. AMS को इन्टरफेस प्रयोगकर्ता-अनुकूल छैन. तपाईं पनि समाप्त गरिएका विज्ञापनहरू मेटाउन सक्नुहुन्न. साथै, रिपोर्टिङका ​​लागि अद्यावधिक सामान्यतया धेरै ढिलो हुन्छ Source .